Ụgbọ elu Ukraine na Tel Aviv na ụgbọ elu Ukraine International ugbu a
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Ụgbọ elu Ukraine na Tel Aviv na ụgbọ elu Ukraine International ugbu a
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Israel Na -agbasa Akụkọ • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ na -agbasa Ukraine
Ụgbọ elu Ukraine International (UIA) na-echetara ohere ị ga-eji ụgbọ elu oge niile n'etiti Ukraine na Israel n'agbanyeghị mmachibido iche iche nke na-emetụta mgbe ị na-abanye n'ókèala steeti Israel.
Ugbu a, onye ọ bụla nọ na mpaghara uhie n'ime izu abụọ gara aga ga-anọpụ iche na ụlọ oriri na ọṅụṅụ COVID-19 nke steeti enwetara tupu ya enweta ule PCR na-adịghị mma na. Ọdụ ụgbọ elu Ben Gurion International. Onye njem ahụ nwere ike mezue oge ịnọpụ iche (ụbọchị 14) ma ọ bụ ụbọchị 7 dabere na ule PCR na-adịghị mma n'ụbọchị nke asaa nke iche.
Na mgbakwunye, na ụgbọ elu n'okporo ụzọ a, ụgbọ elu ahụ ewebatala ụgwọ nkwado pụrụ iche maka tiketi n'etiti Tel Aviv na Kyiv, Kharkiv, Odesa, Dnipro, Zaporizhia na Lviv.
Ukraine International Airlines na-adụ ọdụ ka ị nyochaa nke ọma mmelite nke iwu na mgbochi ọrịa ọrịa nke mba ebe aga.